काठमाडौँको जनसंख्या बृद्धिसँगै अव्यवस्थित शहरीकरणले निम्त्याएको भयानक स्थिति र चुनौतीहरु « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाण्डौ उपत्यकाको जनसंख्यामा बृद्धि सँगै भएको अव्यवस्थित शहरीकरणले भयानक वायुप्रदुषणको स्थिती निम्त्याएको छ । एशियाको तीब्र शहरीकरण भइरहको शहरहरुको सूचिमा काठमाण्डौं अग्रस्थानमा आउँछ । विश्व वैंकले हाल सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा औसत ५ प्रतिशतले शहरिकरणमा वृद्धि भएको देखाँउछ । हालैका दिनहरुमा भएको अध्ययनमा काठमाण्डौं दक्षिण एसियाका शहरहरु मध्ये सबैभन्दा बढी प्रदुषित शहरहरुको सूचीमा नयाँ दिल्ली सँगै उभिएको छ । विश्व स्वास्थ संगठनले तोकेको पि.एम १० नाक बाट छिर्ने धुलो मापदण्ड भन्दा २० गुणा बढी मात्रामा काठमाण्डौंको हावामा पाइने गरेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । पर्यटकीय गन्तव्य भनेर चिनिने काठमाण्डौं शहर आज संसारकै प्रदुषित शहरहरुको सुचिमा पर्नु राम्रो सङ्केत होइन । कचौरा आकारको राजधानीमा धुवाँ र धुलोको मात्रा अहिले पि.एम १० ३५० माइक्रोग्राम /घनमिटर छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको मात्रा 20 μg/m3 annual mean र 50 μg/m3 24hour mean भन्दा माथी जान नहुने भनी स्वच्छ वायुको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । मनसुनी वर्षाले प्रदुषणका कणलाई बगाएर लैजाने हुँदा वर्षायाममा कम र सुख्खा याममा प्रदुषण बढी हुन्छ । जाडो याममा तापक्रम प्रति लोमताको कारणले वायुप्रदुषण बढी हुन्छ । राती र विहान चिसो हावा जमिनको सतह नजिकै तातो हावाको सतहले थुनिन्छ । यसले गर्दा वायुप्रदुषणहरुले चलखेल गर्न पाउदैनन् । कचौरा आकारको भएकाले उपत्यकामा प्रदुषित वायु कैद भएर प्रदुषण भित्रै थुप्रिन्छन ।
स्वच्छ वायुलाई प्रदुषित पार्नमा धुलोको मसिना कण लगायत SO2, NO2,CO, Ozone, सिसा र बेन्जिन जस्ता रसायनहरु नै प्रमुख हुन । यसमा पनि काठमाण्डौंमा प्रदुषणको मुख्य भूमिका धुलोको कण लेखेल्ने गर्छ । यिनै कणहरु मध्ये हाम्रो शरीर भित्र सजिलै प्रवेश गर्न सक्ने दश माइक्रोन भन्दा साना कण पि.एम १० स्वासप्रस्वासको नलीभित्र पस्न सक्छ भने पिएम २.५ फोक्सो सम्म पुग्न सक्छन । काठमाण्डौंको वायुप्रदुषणमा उल्लेखनिय योगदान पुर्याउने एक तत्व यातायातको साधन हो । दैनिक काठमाण्डौंमा पाँच लाख भन्दा बढी सावरी साधन गुड्छन । वाग्मती अञ्चलमा मात्र कुल ६,८८,०२८ सवारी साधन दर्ता भएका छन् त्यसैले हरेक वर्ष उच्च मात्रामा पेटोल र डिजेल खपत हुन्छ र यो वढ्ने क्रममा छ । काठमाण्डौं वरिपरी संचालनमा रहेका १२० इट्टाभट्टीहरु वायुप्रदुषणको अर्को मुख्य कारण हुन् । पि.एम १० को मात्राको ३८ प्रतिशत सवारी साधनले, १८ प्रतिशत कृषिवाट उत्पन्न बस्तुलाई जलाउने क्रममा, ११ प्रतिशत इट्टाभट्टाले, ३ प्रतिशत घरहरुले, १ प्रतिशत डढेलोबाट, ३ प्रतिशत उद्योगबाट र बाँकी १ प्रतिशत अन्य कारणहरुले ओगट्ने गरेको तथ्यांक उपलब्ध छ ।
६. वायु प्रदुषण निवारणमा सरकार उदासिन हुनु
काठमाण्डौंको बढ्दो जनसंख्याले निम्त्याएको सवारि साधनको उल्लेखनिय वृदिलाइ सहज व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वायुप्रदुषण चुलिएको छ । गत १० बर्षमा सवारि साधनको सङ्ख्यामा ३ गुणाले बृद्दी भएको तथ्याङ्कहरुले देखाँउछन् । ति सवारी साधनमा पनि सबैभन्दा बढी हिस्सा मोटरसाईकल, कार ,जीप अनि भ्यानले ओगट्छन् र थोरै मात्र सार्वजानिक यातायातले ओगट्छन्।सवारि साधनको सङ्ख्यामा बृद्दि भएता पनि सुबिधाको गुणस्तरमा भने बृद्दि हुन नसक्नुले यातायात निती प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सवारि साधनको बृद्दीले उपत्यकाले वर्षेनि ९०००३ किलो लिटर पेट्रोल अनि १०६,६८४ किलो लिटर डिजेल खपत गर्छ, जुन कुल राष्ट्रिय पेट्रोल खपतको ४५.५ प्रतिशत अनि डिजिल खपतको १५.५ प्रतिशत हो । ति सवारी साधनले निश्चित मापदण्ड पुरा नगरि पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्दा निस्कने धुवाँले काठमाण्ठौँको हावालाई सास फेर्न अयोग्य वनाएको छ । सवारि साधनहरुमा उल्लेखनिय रुपमा प्रयोगमा आउने मोटरसाईकल ‘Vehicle Emission Testing (VET)” अन्तर्गत जाँचमा पर्दैनन्, नियन्त्रण बाहिर धुवाँ उडाउँदै गुड्छन् । निश्चित वातावरणिय मापदण्ड पुरा गरेको भनेर दिइने ुन्चभभल क्तष्अपभचु प्रभावकारी नहुँदा थप समस्या सृजित भएका छन् । ‘Green Sticker’ को म्याद सकिदा पनि गाडिहरु निर्वाद रुपमा सडकामा गुडिरहेका भेटिन्छन् । ‘Green Sticker’ को म्याद नसकिएको भए पनि गाडिको चर्को धुँवा उडाउँदै गुडिरहेका हुन्छन् । वर्षेनि सवारीको अनुमतिपत्र नविकरण हुँदा सवारी साधनको मर्मत संभार भएको नभएको कुरा जाँच गरिने व्यवस्था छैन र मापदण्डलाई परिवर्तन पनि गरिएको छैन । नेपाल भन्दा पछि सवारी प्रदुषण मापदण्ड अपनाएको भारत यूरो ४ मा गइसक्दा पनि नेपाल यूरो ३ मै रहनुले पनि सरकारी उदाशिनताको पराकाष्ठा देखाँउछ । गाडिहरुमा ‘Fuel Filter’ र ‘Air Filter’ को निश्चित मापदण्ड तोकेर अनिवार्य जडान हुनुपर्ने प्रावधान नभएकाले पनि प्रदुषण बढेको छ । डिजेल इन्धनको खपत हुँदा धुँवाबाट निस्कने कण मध्ये ९० प्रतिशत एक माइक्रोन भन्दा साना नापका हुन्छन । ब्राजील, ताइवान र इजिप्टजस्ता देशहरुले डिजेल कारलाइ प्रतिबन्ध गरेका छन् । नेपालमा सर्वाधिक प्रयोग हुने डिजेलमा १००० पि.पि.एम.सल्फर हुन्छ भने यूरोपमा प्रयोग हुने डिजेलमा १५ पि.पि.एम.सल्फर पाइन्छ ।
काठमाडौमा केहि बर्ष अघि सुरु भएको सडक बिस्तारले विकासमा प्रति हामि जति आशाबादी छौं त्यति नै निराशा वायुप्रदुषण बढ्नाले छाएको छ । सडक विस्तार गर्दा वातावरणमा हुने प्रदुषण माध्याम नपुर्याई बिस्तार कार्य सुरु गर्नाले आज काठमाडौको वायु संसारकै दुषित मध्ये हुन पुगेको छ । सडक भत्काउँदा एक साथ कालो पत्रे गर्ने कार्य पनि गर्नुपर्छ । नत्र धुलो उड्छ र वायू प्रदुषित हुन्छ भन्ने सामान्य चेतना पनि हाम्रा योजनाकारहरुले प्रर्दशन गर्न नसक्नुले आज काठमाडौको वायुले विश्वभरि विख्याती कमाएको छ ।सडकहरुको राम्रो मर्मत संभार र अति महत्वपूर्ण सुचि बनाएर तत्काल कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्ने देखिन्छ । सडकमा अहिले भइरहेको घन्टाको जामले वायुप्रदुषण वृद्दि भइरहेको छ । सडकमा गाडिहरु कम अबरोधका साथ गुड्न र जाममा परि इन्धन धेरै बाल्नु नपरेमा पनि वायुप्रदुषण घटाउन सकिन्छ । सडक संरचनाको वृद्धि विकास गर्दा सरकारी नीति खालि निजी सवारी साधनलाई मात्र ध्यान दिने खाले छ । सडक वृद्धि मात्र हुनु र उपयोगीमुखि नहुनुले थप निजी सवारि साधन बढाउन मात्र भूमिका खेल्छ भन्ने बिज्ञहरुको बुझाइ छ । हाम्रा बाटाहरु सार्वजानिक यातायातका सवारि साधन लक्षित हुनुपर्छ, समर्पित लेनहरुको विकास गरिनुपर्छ र निजी यातायातको प्रयोग गर्न निरुत्साहित पार्ने नितीको विकास हुनुपर्छ । ‘Bus Rapid Transit (BRT)’ को अवधारणामा प्रवेश गर्नुपर्छ र ठूला सवारि साधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।
हिड्नु र साइकल चलाउनु स्वास्थको लागि लाभदायक मात्र छैन्, संसारभर अति लोकप्रिय आवत जावतको माध्यम भएको छ ।विकसित देशहरुमा बहुसंख्यक मानिसहरु हिड्ने गर्छन । चाइनामा साइकल चड्ने र हिडनेको सङख्या ६५ प्रतिशत छ । हाम्रो सडकहरु साइकल मैत्रिहरु त छदै छैनन्, आउँदा दिनमा पनि सो हुने सम्भावना अझै न्युन छ । काठमाण्डौंको सडक संरचनाहरुमा साना गल्लीहरु र सांघुरा बाटो छन् । काठमाडौंको सडक योजनाहरु परम्परागत रुपमा हिड्नलाई नै वनाइको आभास हुन्छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयले जाइकासँग गरेको हालैको अध्यन प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा मानिसहरुले तय गर्ने यात्राको ४०.७ प्रतिशत हिस्सा हिडाइले ओगट्छ भने बितेको २ दशकमा हिड्नेहरुको सङ्ख्यामा २३ प्रतिशतले कमि आएको हो । विकशित देशहरुका सडकहरु साइकल मैत्रि निर्माण भइरहदा नेपालमा भने परिक्षण आयोजनामै सिमित भएको छ । साइकलका लागि बनाइएका लेनहरु अहिलेको लागि सकरात्मक प्रयासका रुपमा देखिए पनि उपत्यकाका सडक भरी नै यसको सन्जाल बन्नु पर्ने देखिन्छ । उपत्यकामा दैनिक हजारौ मानिसहरु हिडडुल गरिरहँदा पनि काठमाडौं हिडडुल गर्नका लागि अति नै अयोग्य सहरका रुपमा परिचित छ । हिड्नका लागि सडक छेउ व्यवस्थित र अन्तराष्ट्रिय स्थरको बनाउनु पर्दछ । शहरका प्रमुख केन्द्रहरुलाई सवारी साधन मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर तुरुन्तै साईकल र हिडने प्रवृतिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
मान्छेले एक दिनमा करिब २२,००० पटक स्वास लिदा लगभग २० किलो हावा लिने गर्दछ । हामीले खाने खाना र पानी भन्दा हावाको यो मात्रा धेरै नै गुणा बढी हो । स्वासप्रस्वासको रोगहरुमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत प्रतिशत सम्म प्रदुषित वायुकै कारणले गर्दा हुने गरेको तथ्याङक उपलब्ध छ । काठमाडौंको अस्पतालहरुमा दिन प्रतिदिन श्वासप्रश्वासको रोगिहरुको सङख्यामा उल्लेखनिय वृद्धि हुँदै आएको छ । धेरै जसो प्रदुषक तत्वहरु हामीले श्वास लिदा शरिर भित्र जाने भएकाले वायुप्रदुषणको मुख्य प्रभाव हाम्रो श्वासप्रश्वास प्रणालीमा पर्दछ । प्रदुषक तत्वहरुले हाम्रो प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ, जसले गर्दा फोक्सोको क्यान्सर, दम, लगायतका स्वास प्रस्वासका रोगहरुले सताउछ । वातावरण मन्त्रालयको एउटा तथ्याङक अनुसार नेपालमा वर्षेनि १६ सय भन्दा वढीको वायु प्रदुषणकै कारणले मृत्यु हुने गरेको छ । स्वच्छ उर्जा नेपालले सन् २००२ मा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार काठमाडौंका करिब १५ लाख मानिसहरुले स्वास प्रस्वास सम्बन्धि कुनै न कुनै रोगबाट ग्रस्त छन् । अहिले अस्पतालमा दर्ता हुने बिरामीहरु मध्ये १६ प्रतिशत वायु प्रदुषणकै कारणले रोगिभएका भेटिन्छन् । वायु प्रदुषणले निम्ताएको वार्षिक स्वास्थ्य खर्चमा वृद्धि भइ अहिले ग्क्४ २१ मिलियन पुगेकोछ जुन देशको कुल गृहस्त उत्पादनको ०.२९ प्रतिशत हो । पि.एम.१० को मात्रा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा झार्दा करिब १,३५,४७५ बच्चाहरुमा ब्रोनकाइटिस्, ५ लाख दमको रोगी लगायत हजारौ अस्पताल आउने बिरामिहरुको संख्यामा कमि ल्याउन सकिन्छ । विश्व स्वास्थ संघठनको प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक बिश्वभरी ७ करोड मानिसहरुको प्रदुशित हावाका कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्‍त्री ओली केही बेरमा डिस्चार्ज हुँदै
काठमाडौं । एपेन्डिसाइटिस शल्यक्रियापछि अस्पतालमै स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आजै डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरिएको
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अस्पताल पुग्नुभएको छ